Ka qayb qaado Gurmadka abaaraha | allsanaag
Ka qayb qaado Gurmadka abaaraha
Shirkii Telefoonka ee Qurba joogta reer Maakhir maalintii shalay maxaa ka soo baxay?
Maalintii shalay quba joogtii reer Maakhir ee isugu jiray Rag iyo Dumar, oo ka soo qayb gal khadkii telefoonaka ay ku balansanaayeen, dhamaantood waxay ahaayeen dad ka damqaday dhibta ay abaartu ku hayso degaanaddi ay ka soo jeedeen iyo guud ahaan Soomaaliya. Waxayna diyaar u ahaayeen una diyaar garoobeem iyaga oo daacad ka ah in dadkaa dhibaataysan oo haraadka iyo gaajada la il daran, sidii ay kaalmo deg deg ah u gaarsiin lahaayeen .
Hadaba intii fursadda u wayday ama mar kale ka war heshay in shirka telefoonku jiro, ha la xiriireen Odayaasha magaalada ay joogaan ama Guddiyada ay leedihiin.
Ugu danbayntii Shirkii shalay siduu ku bilowday ee wacyi gelinta , walaaltinimada iyo ismaqalka la is dhegaysanayey ayaa ahayd bilow wanaagsan . Insha Allah balantii la qaadayna guul ayeey ku dhamaanaysaa iyo la Ururiyo lacag tiro badan oo aan horay cadadkeeda loo ururin.
Qofkii reer Maakhir ee ka qayb qaadan waaya Qaaraanka iyo shiraraka ha ogaado. In Maakhirnimadu ahayn guri la soo galo oo laga baxo’. Ha naqon Tuke canbaar leh ee kaalmee walaalkaaga Soomaaliyeed ee dhibaataysan”
← Qurba joogta beesha Harti oo taageetray Mowqifka Puntland Musharixiinta xildhibaanada aqalka sare ee beesha Isaaq →